Georginio Wijnaldum oo iska diiday heshiis cusub oo ay usoo bandhigtay Liverpool… (Kooxdee ayuu doonayaa inuu ku biiro?) – Gool FM
Georginio Wijnaldum oo iska diiday heshiis cusub oo ay usoo bandhigtay Liverpool… (Kooxdee ayuu doonayaa inuu ku biiro?)
(Liverpool) 06 Jan 2021. Waxaa gabo gabo ku dhow qandaraaska Georginio Wijnaldum uu kula joogo kooxda Liverpool, kaasoo dhici doona xagaaga, waxaana taasi ay sal dhig u tahay shakiga badan ee ku hareersan mustaqbalkiisa.
Reds ayaa qandaraas cusub usoo bandhigtay xiddigeeda khadha dhexe ka ciyaara, waxaana wararka ka imaanaya dalka Ingiriiska ay sheegayaan in Wijnaldum uu maanta iska diiday heshiiska cusub ee ay usoo bandhigtay kooxdiisa.
30-jirkan ayaa lagu soo warramayaa inuu doonayo ka tagista Liverpool, si uu ugu biiro naadiga Barcelona.
Tababare Jurgen Klopp ayaa si aad ah u doonaya xiddigan, balse naadiga difaacaneysa horyaalka Ingiriiska ayaa ku guuldarreysatay inay ku qanciso Wijnaldum heshiiska cusub ee ay usoo bandhigtay.
Laacibka reer Netherlands oo 23 milyan oo gini kaga yimid naadiga Newcastle United sanadkii 2016 ayaa xiiso badana ka helaya naadiga Barca, waxaana wararku ay sheegayaan inuu qushiisa xiiseynayo la shaqeynta macallinkiisii hore ee Ronald Koeman.
Mesut Ozil oo heshiis la gaaray kooxdiisa xigta... (Goormee ayuu la midoobi doonaa naadigiisa cusub?)